Fahatsiarovana ny faha-46 taona nahafatesan'ny Jeneraly Ratsimandrava | Primature
Mahazoarivo, ny 11 febroary 2021 – Nomarihina teny Ambohijatovo Avaratra androany maraina ny fahatsiarovana ny faha-46 taona nahafatesan’ny Jeneraly Ratsimandrava Richard teo am-perinasa, ka tonga nanome voninahitra izany fotoana izany ny Praiminisitra Ntsay Christian.
Ny Tafika Malagasy manontolo no niara-nisalahy nanatontosa izao fanamarihana izao, ary toy ny isan-taona dia niompana tamin’ny fanomezam-boninahitra an’ireo rehetra nodimandry teo am-panatanterahana ny fanompoana ny firenena nandritra ny herintaona farany ny lanonana, ka nametraka fehezam-bonikazo teo amin’ny tsangambato teo amin’ny toerana naha-lavo ny Jeneraly ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ao amin’ny Tafika, ary nanomboka an’izany ny Lehiben’ny governemanta. Notononina tsirairay ihany koa ny anaran’ireo lavo, na Miaramila izany, na Zandary, na Polisim-pirenena; ka notolorana mari-piraisan-kina tamin’ny fomba hita maso ireo fianakaviana nilaozan’izy ireo.
Andraisana lesona maro eo amin’ny fanehoana ny fahamasinan’ny tanindrazana iraisan’ny Malagasy rehetra ny fahatsiarovana olo-manga toy ny Jeneraly Ratsimandrava, hoy ny Praiminisitra, nohon’ny fahasahiany nijoro sy nandray andraikitra tamin’ny maha-Filoha azy, tao anaty fotoan-tsarotra nandalovan’ny firenena, ary dia toy izany koa ireo mpitandro ny filaminana rehetra maty teo am-perinasa.
Nanaovan’ny Praiminisitra jery todika ny ezaka vitan’ireo mpitandro ny filaminana teo ambany fitarihan’ny fitondram-panjakàna, ka notsipihiny manokana ny nahavitàna nifehy ny fandriampahalemana teo amin’ny fiainam-bahoaka, tamina faritra sy distrika maro eto amin’ny firenena. Nambarany fa nanomboka ny taona 2018 no efa nisafidy ny handala ny demokrasia ny firenentsika, ka nametraka fitondrana tsara tantana sy tandalàna ary mandala ihany koa ny fahalalahana. Noraisiny ho ohatra teto ny fahavitan’ireo fifidianana maromaro, izay nampiseho taratra ny fanajàna ny safidim-bahoaka. Anisan’ny nahafahana nanatontosa izany rehetra izany ny paikady napetraky ny mpitandro ny filaminana, ary indrindra ny fiheverana ny tombotsoa iombonan’ny mpiray tanindrazana, ka teo no nanoloran’ny Praiminisitra ny fisaorana sy fankasitrahana tamin’ny anaran’ny Filohan’ny Repoblika sy ny vahoaka Malagasy manontolo, ho an’ny Miaramila, ny Zandarimariam-pirenena, ary ny Polisim-pirenena. Notsiahiviny ny hamaroan’ny andraikitra miandry azy ireo eo amin’ny lafiny fiarovana, sy ny fandraisana fepetra nataon’ny fitondram-panjakàna mifandraika amin’izany, dia ny fanitsiana sy fanavaozana rafitra eo anivon’ny Tafika Malagasy.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 10 Février 2021
Fivoriana mikasika ny drafi-pirenena marolafy iatrehana ny valan’aretina Corona virus →
Fankalazana ny faha-100 taona nijoroan’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo